[14 / 02 / 2020] Nidaamyada tareenka ayaa dul saarnaan doona Miiska Ankara	06 Ankara
[14 / 02 / 2020] Konya Metro, Konyaray, Rugta Wadada iyo Xarunta Saadka ee sanadka 2020 Barnaamijka Maalgashiga	42 Konya
[14 / 02 / 2020] Bursa ayaa ka horreysay 2 magaalo muddo 141 sano ah oo ay xirnaayeen taraafikada	16 Bursa
Maalinta: Meey 20, 2019
'Sawirada ugu horeysa' Sawirrada ayaa lagu sawiray waddooyinka dadku maro ee Sakarya
Waaxda Gaadiidka ee Degmada Sakarya waxay fulineysaa codsi cusub. Daraasaddan cusub, 'Sawirada Baadheer' waxaa laga soo qaaday waddooyinka lugta ah ee qaybo kala duwan oo magaalada ka mid ah si loo kordhiyo wacyigelinta mudnaanta dadka lugta ku leh gaadiidka. [More ...]
Mashruuca Tareenka iyo Uraysim waa Eskişehir 's Case Case
Wadnaha qaybta nidaamka tareenka wuxuu ku noqon doonaa Eskişehir. Rugta wershadaha ee Eskişehir (ESO), oo goobjoog u ahayd sanadka 163 ee dalkeena 125 sanadlaha ah ee tareenka, wuxuu noqday xarun Eskişehir oo leh dhowr mashruuc. [More ...]
Tareenada TCDD ee Raashinka Cuntada Waaweyn ee Badan
Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkiga, Ankara-Eskisehir dhexeeya tareen-xawaaraha sare (YHT) ololaha on 2009 ah, iyo waqtiga u dhexeeya Eskisehir-Istanbul bilaabay xnumx't. Shilalka dhaca mararka qaarkood khadka ka waqti ka waqti, waqti ka waqti ragga iyo dumarka rakaabka ah [More ...]
Asphalt Pavement Completed at Yuzbasilar Junction
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay wadaysaa mashaariic muhiim ah si ay u sameyso halbowleyaasha waaweyn ee magaalada. Wajahadan dhexdeeda, howlaha isgoysyada cusub waxaa lagu fuliyaa D-100 iyo D-130 wadooyinkana waxaa loo sameeyay transit. Metropolitan ka shaqeysa D-130 [More ...]
Mashruuca 5 ee Furitaanka Gawaarida ee Bursa
Intii aan sheekaysaneynay… Waxaan aragnay Duqa Caalin Alinur Aktaş inuu diyaar yahay oo go’aansado ka sokow qaabkiisa wanaagsan ee caadiga ah. Shaki kuma jiro kazanmak Helitaanka doorashooyinka waa isku-kalsooni dhisid. Ka sokow, hal-ku-dhigga doorashada [More ...]
Dib-u-habeyn Caafimaad ee Shaqaalaha Tareenka
Xeerarka ku saabsan wax ka beddelka Xeerka Shuruucda Waddooyinka Khatarta ah ee Tareenka, oo ay diyaarisay Agaasinka Guud ee Xeerka Tareenka muddo dheer, ayaa lagu soo daabacay Jariidada Rasmiga ah ee taariikhaysan ee May 18 waxayna dhaqan gashay. Sharciga Wax ka Beddelka [More ...]
RayHaber 20.05.2019 Warbixinta Shirka
Daboolida goleyaasha iyo Qeybaha Aluminiumka waxaa loo iibsan doonaa Mashruuca Tareenka Qaranka ee Korantada [More ...]
Diyaarad La Xiriiray, La Qaadatay ... Eeg Maddaarka Istanbul
"Garoonka Istanbul ee diirada u horeysay Turkey ee cimilada in loo isticmaalo" sheegasho waxaa u hormarsataan ku doodeen wararka. Radar-ka saadaasha hawada, oo loo adeegsado garoomada diyaaradaha horumaray, ayaan laga heli karin garoonka diyaaradaha Istanbul. Gegada diyaaradaha ee ugu weyn aduunka oo ay dowlada leedahay [More ...]
Tirada Dayuuradaha Maalinlaha ah ee laga soo bilaabo 5 ilaa 4 ee Tareenka Island
Tirada duulimaadyada maalinlaha ah ee Tareenka Ada, oo bilaabay duullimaadyada kahor 31 March doorashadii u dhaxeysay Adapazarı Pendik, waxaa laga yareeyay 5 illaa 4… 31 March [More ...]
SOLOTÜRK Duulimaadyada Dalxiiska ee Samsun Goosta Neefta
Xuska 19 May Atatürk, Munaasabadaha Maalinta Dhallinta iyo Isboortiga ee Samsun ayaa isu keenay shirweynaha gobolka. Gazi Mustafa Kemal Ataturk iyo asxaabtiisa Samsun si ay u bilaabaan Halganka Qaranka si loo bilaabo 100. sanadkii [More ...]
Hawlaha Muhiimka ah ee Dooxada Baaskiiladaha
Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaysaa martigelinta booqdayaasha Baaybalka Baaskiilka ee Baastada. Marka la eego baaxadda Toddobaadka Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada, Sakarya Agaasimeyaasha Gobollada ee Waxbarashada Qaranka ayaa u dabaaldegaya iyo munaasabadaha ka socda Dooxada Baaskiil ee Xaafadda Camili. [More ...]
Gobolka Gobolka Izmit ayaa noqday Bermuda saddexag oo tareenada
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo ku xigeenkiisa Halkalı - Khadka Gebze ee magaalada ma dhammeeyo guul darrooyinka. Ku dhawaad ​​maalin kasta gobolka halkaas oo tareen uu mar kale burburay isla sawirradii shalay [More ...]
TÜLOMSAŞ waxay sii wadaa daraasadahooda casriga ah ee cilmi ahaaneed
Sayniska Caalamiga ah ee Cilmiga dabiiciga ah iyo Dood-cilmiyeedka Dhismaha (Dood-cilmiyeed caalami ah oo ku saabsan ka-qeybgalka Sayniska Dabiiciga ah iyo Architecture) ayaa lagu qabtay inta u dhaxaysa taariikhaha 02.05.2019 - 04.05.2019 ee Ramada Plaza ee Izmit / KOCAELI. KoCeli asaasaqa Jaamacadda [More ...]
500T Made 3 Watch Biyo la'aan
Cengiz, abuuraha fikradda gelinta mashiinka iibinta biyaha ee gaadiidka dadweynaha ka dib seddex saacadood oo rajo la'aan ah inta lagu guda jiray safarkiisa lambarka basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee 76T oo leh 500 wuxuu joojiyay inuu dhex maro Tuzla iyo Topkapı ee Istanbul. [More ...]
Antalya 3. Mashruuca Nidaamka Tareenka Etap wuxuu ku socdaa xawaare buuxa
Xubinta BTS wuxuu kaga mudaaharaaday hortiisa Exile TCDD Xarunta
Madaxweynaha MTB Özdemir: 'Mashruuca Weelka Hawada waxaa iska leh Mersin'